Shabaab oo caawa weeraray Magaalada Dhuusamareeb | Dhacdo
Shabaab oo caawa weeraray Magaalada Dhuusamareeb
Maleeshiyada Ururka Al Shabaab ayaa saqdii dhexe ee caawa madaafiic ku weeraray Magaalad Dhuusamareeb, oo shir uu uga socdo Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya in tiro madaafiic ahi ay ku soo dhaceen gudaha magaalada, taasoo aan la ogayn cid wax ku noqotay, sababo ku aadan madaafiicda oo goor dhow uun bilowday iyo xilliga oo habeen ah.
Wararka ayaa sheegaya in rasaas xoog leh laga maqlayo nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb.
Bashiir Nageeye oo ka mid ah dhalinta deegaanka ayaa sheegay inay hurdada kaga soo baraarugeen daryanka madaafiicda caawa lagu weeraray magaaladaasi.
“Habeen bar dadkoo hurda, jewiguna degan yahay baa waxaan hurdadii kaga soo toosnay dhawaqa hoobiyaha, oo ka imaanaya jihadii habeeno ka hor madaafiicda laga soo tuuray. Waxaana xigay rasaas xoogan oo hadda ka socota aagga Garoonka Ugaas Nuur, xabaddu waxay u muuqataa mid lees dhaafsanayo.” Ayuu yiri Bashiir Nageeye oo Dhacdo.com la hadlay.
Nageeye ayaa intaa ku daray “Xaaladda magaaladu aad bay u kacsan tahay, qof walbana wadnahuu farta ku haya, waxaa hadda naloo sheegay in madaafiic ku soo dhaceen xaafadaha qaarkood, manase hubo cid wax ku noqotay.”
Waa weerarkii labaad oo toddobaadkan gudahiis lagu qaado Xarunta Maamulka Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb.
Caqabadaha ku gadaaman muddada lagu heshiiyay in doorashada dalka lagu qabto
Iyadoo Ra'iisal Wasaaraha Xukuumadda iyo Madaxda Dowladda Goboleedyada ay ku heshiiyeen in muddo lixdan cisho ahi lagu qabto doorashada dalka ayaa waxaa...